Lọ ọrụ njem - TMTeck Instrument Co., Ltd.
Anyị na-ekwe nkwa na-enye gị na klas mbụ na ngwaahịa na mbụ factory mmepụta na nkwakọ. Anyị na-agbaso ihe ndị achọrọ maka ụkpụrụ ọkachamara, a na-ejikwa usoro niile jikwaa ya na njikwa iji hụ na ngwaahịa dị elu.
Ajụjụ ọ bụla banyere àgwà ahụ, anyị nwere ike ịnye gị akwụkwọ nkwado ngwaahịa, maka ihe ndị a chọrọ maka ndị ahịa, anyị nwere ike ịme nyocha nyocha zuru oke.
Na-arụ ọrụ na njikwa njikwa ikike na teknụzụ, anyị na-eji ngwa nyocha kachasị elu na arụmọrụ, ngwaahịa niile agabigala usoro nyocha siri ike iji hụ na nkwụsi ike ngwaahịa na ndakọrịta. Anyị nwere usoro nyocha nke usoro sayensị na nke siri ike, dịka ụkpụrụ niile nke ụlọ ọrụ mba na mba dị
Dị ka ọrụ dị iche iche na ndị ahịa si dị iche iche chọrọ, anyị nwere ike ịnye ọrụ ahaziri iche na nyocha ndị ọkachamara na ọrụ nke imepụta ihe ọhụrụ iji gboo mkpa gị pụrụ iche. TMTeck dị ka ndị otu kọmitii na-ahụ maka ndọtị nke NDT, na-arụsi ọrụ ike na ntinye ụkpụrụ ụlọ ọrụ, idegharị yana ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị mkpa edepụtara. na-eme onyinye ruru eru maka mmepe nke ụlọ ọrụ NDT. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa TMTeck abụrụla akara maka kọleji ule mba na ọzụzụ nyocha ọpụrụiche nke mba, ejirila ya rụọ ọrụ, imepụta, usoro njikwa mma nke ọkụ, ụgbọ mmiri, ụgbọelu, ikuku, ike eletriki, mmanụ ala, kemịkalụ, pipeline, ụlọ ọrụ ndị agha, ụlọ ọrụ nuklia, ụgbọ mmiri, ụgbọala, metallurgy, nchara ígwè, ụgbọ okporo ígwè, mahadum, arụwo ọrụ dị mkpa n'ịkwalite mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ NDT na ogo nke ngwaahịa ụlọ ọrụ, na-ahụ maka ọrụ nchekwa nke mmepụta ụlọ ọrụ na belata ihe ize ndụ nke ahia. TM ckka nwere ike ịme ngwá dị ka ndị ahịa chọrọ.do ọrụ OEM / ODM.
TMTeck nwere teknụzụ nrụpụta zuru oke, ụzọ nnwale zuru oke na ike R&D siri ike. Site na NDT obere ngwa ọrụ na nnukwu usoro nchọpụta akpaka, TMTeck nwere ikike ikike ọgụgụ isi, ikike ịmepụta ihe na ikike nwebisiinka. The ngwaahịa e ọdịda aha nke onwe ha ọhụrụ na ngwaahịa. TMTeck na-eji ụkpụrụ sayensị iji jikwaa usoro mmepụta, site na R&D na mmepụta, ngwaahịa niile dị n'ụzọ ziri ezi na ISO9001, akụrụngwa na akụrụngwa ọ bụla ga-agafe nyocha na nnwale tupu e nyefee, ịwepụta akụrụngwa na nbipu ga-ezu oke dịka usoro ọkọlọtọ si dị. na nkọwapụta iji hụ na ngwaahịa dị mma. Ogo na arụmọrụ nke ngwaahịa TMTeck eruola ụlọ ọrụ na-eduga n'ọkwa. Ngwaahịa TMTeck agafeela ọtụtụ asambodo ọkachamara dị ka asambodo EU CE, asambodo GOST Russia, n'ụzọ zuru oke dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ mba dị mkpa si dị.
Mkpọchi Pipe, Ultrasonic Transducer Gịnị, Mmezi Nkanka, Mgbanwe Nnwale Ule, Ule ule, Ultrasonic mmezi Block,